Uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokuthola ababhalisile ku-Youtube ers ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
May 12, 2021 0 Comentarios 651
Abantu abaningi bayafunda ukuthi kungenzeka yini ukudala isiteshi sabo se-YouTube bese uqala ukwenza imali ngale nkundla. Uma lokho kuyindaba yakho, ake sikutshele ukuthi uzodinga usizo lwababhalisile. Kungakho namuhla sikukhombisa ezinye izindlela zokuthola abalandeli abasha ku-YouTube.
Ababhalisile bangokhiye ku-YouTube. Ingxenyekazi idinga inani elincane labalandeli ukuze bakwazi ukwenza imali ngesiteshi sethu futhi ngaleyo ndlela siqale ukuthola imali ngokwakhiwa kokuqukethwe okubukwayo. Kukhona ezinye izinhlelo zokusebenza ezingasisiza ekutholeni ababhalisile futhi lapha sikutshela ukuthi yiziphi ezihamba phambili.
Ukukhula ku-YouTube akulula
Abasebenzisi abaningi beplatifomu ye-YouTube benza imali ngokufaka nje okuqukethwe kulolu hlelo lokusebenza, kodwa-ke, kunento eyodwa okumele yenziwe icace futhi lokho ukukhula ku-YouTube akulula njengoba abanye bekholelwa.
Ukwengeza ababhalisile abasha esiteshini sethu kuzodingeka ukuthi sitshale isikhathi esiningi ngaphakathi kwepulatifomuKepha akuwona wonke umuntu onekhono lokuchitha amahora akhe okuqukethwe kohlelo lokusebenza. Kulezi zimo usizo olwengeziwe ngeke lube lubi.
Kungakho namhlanje sifuna ukwethula ezinye zezicelo ezinhle kakhulu zokuthola ababhalisile ku-Youtube. Ngeke basenzele wonke umsebenzi, kepha bazosisiza ukwenza umsebenzi wokungeza abalandeli ungabi yinkimbinkimbi futhi ube yisicefe.
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili eziphezulu
Kuwebhu sithola uhlu olubanzi lwezinhlelo zokusebenza ezenzelwe ukuthola ababhalisile ku-YouTube. Kukhona okunye okusebenzayo futhi okunokwethenjelwa, kanti abanye benza izethembiso ezingamanga.
Sikulethela wena phezulu ngezicelo ezinhle kakhulu ukuthola abalandeli ku-Youtube. Qaphela futhi uthole okuningi kulawa mathuluzi amangalisayo.
Olunye lohlelo lokusebenza oluhle kakhulu olungakusiza uthole ababhalisile abasha ku-YouTube kunjalo TubeMine. Ngaleli thuluzi uzokwazi ukufaka umfutho omkhulu esiteshini sakho, futhi okuhle kunakho konke ukuthi kuzoba ngesikhathi esifushane kakhulu.
Ngeke kudingeke ukuthenga abalandeli. Imodi yokusebenza yalolu hlelo lokusebenza iqukethe ikakhulukazi yabelana ngamavidiyo ethu nalabo abayingxenye yalo mphakathi. Uma sifuna ukwabelana ngevidiyo sizodinga "izinhlamvu zemali" ongazithenga noma uzithole ngokubuka amavidiyo wabanye abasebenzisi bohlelo lokusebenza.
Lolu hlelo lokusebenza olumangazayo belungekho ohlwini lwethu. Siyabonga ngakho, sizofinyelela ababhalisile abaningi, ukuthandwa nokubukwa okukhulu ngaphakathi kwesikhulumi se-YouTube.
Isebenza kalula nje: Ulayisha ividiyo, ukopisha isixhumanisi kuhlelo lokusebenza bese wenza iphromoshini yokuheha abanye abasebenzisi. Ukuze wenze lokhu uzodinga "izinhlamvu zemali" ozothola ngokubuka okuqukethwe kwabanye abasebenzisi.
I-UTViews - I-Views Booster
Lapha sethula enye yezindlela ezingcono kakhulu zokuthola ababhalisile ku-YouTube kalula futhi ngokushesha. Lolu hlelo lokusebenza lusebenza ngokufana nezinye. Kumele wabelane ngevidiyo yakho kuhlelo lokusebenza futhi bazosiza abanye abasebenzisi ukuyibona.
Uzokwenza kanjalo zidinga izinhlamvu zemali ukusebenzisa uhlelo lokusebenza. Uthola lolu hlobo lwemivuzo ngokubuka okuqukethwe abanye abasebenzisi abakufaka epulatifomu.
1 Ukukhula ku-YouTube akulula
2 Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili eziphezulu
2.3 I-UTViews - I-Views Booster